Ubuhle bezilokhu buheha abesifazane. Kodwa akuwona wonke umuntu owazi ukuthi angakhetha kanjani kahle izindwangu zokugcoba nokuthi azigqoke kanjani ngokufanele.
Abalando-mlando basaphikisana ngalolu daba - ukuthi izingubo noma izicwecwe zivele ekuqaleni. Abantu abaqhoshayo ngendlela yonke bahlobisa umzimba wabo ngobuhlalu, izintambo ezivela emazinyo ezilwane, namacici. Iyini imfihlo yalezi zibukeka njenge-trinkets. Kungani imihlobiso ingalahlekelwa ukuthandwa kwabo?
Kusukela emlandweni siyazi ukuthi izingubo zabantu basendulo zaziyiminyaka eyisimanga, kwakuyinto nje ebaluleke kakhulu. Kodwa ubucwebe bekungesiyo nje into yokufinyelela, kodwa kwakuyisibonakaliso esithile sokuhlukanisa, isibonakaliso sesimo senhlalakahle, kubonakalise ukuchuma komnikazi womnikazi. Ngalezo zinsuku, akekho owayekhathalela ukuthi lo mhlobiso uhambisana yini, ngaphandle. Ukuqokwa kwabo kwakungagcizeleli ubuhle, kodwa kuphela ukubonakaliswa kwesimo senhlalakahle kanye nengcebo. Amagugu azuzwe njengezizukulwane eziningi.
Namuhla, le ndima igcinwe ubucwebe. Ukwengeza nokugcizelela ubuhle besifazane nesithombe sakhe. Into ebaluleke kunazo zonke lapho ukhetha izesekeli akufanele ukwedlulele, hhayi ukuphenduka i-clown noma isihlahla sikaKhisimusi. Konke kufanele kube ngokulinganisela. Kodwa unganaki ngisho nokungazinaki ubucwebe. Phela, ngisho ne-suit ebiza kunazo zonke noma ingubo ehlelekile ngaphandle kwezesekeli ezingeziwe zingashintsha, zibe yinto embi. Futhi ngokuphambene nalokho. Ngisho nengubo elula, ehlakaniphile, ehlanganiswa nemihlobiso ekhethiwe kahle, iphenduka izingubo zobukhosi.
Wonke umuntu wesifazane uzibuza ukuthi angakhetha kanjani ubucwebe obufanele ukuze enze isithombe esiyingqayizivele, esithandwayo. Indlela elula yokuthola ubucwebe ngesembatho esithile, ucabangela ikhwalithi yendwangu, injongo yayo. Ngaphandle kwendwangu elula futhi engabizi, ishibhile futhi inhle kakhulu umhlobiso kufanele ube. Kulokhu, ukuvumelana kutholakala.
Ukuze ugqoke isitayela sezemidlalo izindwangu ze-denim noma i-raincoat, ukuhlobisa ngesitayela esiqinile kungcono kakhulu. Izinto - i-nickel, insimbi, isiliva, i-ceramics, isikhumba, izinkuni. Indlela yobucwebe kufanele ibe yi-geometri.
Izitshalo zebhizinisi ezenziwe ngoboya ne-flannel zihlanganiswe ngokugcwele nemihlobiso efanayo njengemidlalo yezemidlalo. Ukuhlobisa ngamatshe amancane kuyamukeleka: i-agate engenazimpande noma ezingenakuphulukiswa, ama-coral, ama-turquoise, "iso lehlosi" ...
Uma isembatho sakho sithungwe kusuka ekukhanyeni, indwangu yomoya - isilikhi, i-chiffon, i-crepe de Chine, khona-ke ukuhlobisa kufanele kube ukukhanya, ukuguqulwa, nezindawo ezimile. Iphelele ngamatshe anjengefihla, i-aquamarine noma amaparele.
Uma uthenga umhlobiso omusha, qinisekisa ukuthi kuhambisana nawe, ukuthi uzogcizelela ubuhle bakho, hhayi ngokuphambene nalokho. Umhlobiso kufanele uhambelane nobudala, uhlobo lokubukeka, ubuciko futhi, ngokuqinisekile, kanye. Uma ungaqiniseki ngokuzikhethela kwakho, kungcono ukwenqaba ukuthenga. Futhi uma uphuma ekukhanyeni, ngaphandle kokuzethemba ekukhethweni okungenakulinganiswa kobucwebe, kungcono ukuyeka izesekeli ngokuphelele.
Ngokuvamile abesifazane abathandekayo bakhohlwe ukuthi iminyaka ngayinye ihambisana nesitayela esithile sokuhlobisa. Amantombazane amancane azobukeka ewubuwula ngesekeli ezinkulu. Izindandatho zegolide ezinkulu, amacici amanqwaba amancane, amatshe amakhulu ayigugu futhi amancane afanelekayo abesifazane asebekhulile. Futhi ngokuphambene nalokho. Abesifazane abaneminyaka yobudala abanzima abakwazi ukukhokhela ama-trinkets ahlose ukukhanya.
I-Coco Chanel engenakulibaleka yathi ukufeza ubuhle, ubungakanani kufanele bushintshwe ngekhwalithi. Kuzo zonke ezembethe owesifazane, kungcono ukuthatha okuthile ngaphandle kokungeza okunye okunye.
Ungakhohlwa into esemqoka: ukuhlobisa kudalwe ukuhlobisa, hhayi ngezinye izinhloso. Indlela yokukhetha ubucwebe obufanele wonke owesifazane ozikhethela yena, ukuthembela ekuthandweni kwakhe kanye namathuba akhe. Ngakho ake izifiso zakho zihambisane nemisebenzi. Yiba ngokwakho umhlobiso.
Izesekeli zokugqoka okuluhlaza
Izimpawu zothando: iqoqo lomlingani Usuku lukaPandora luka-Valentine-2017
Ungakhetha kanjani iparele elilungile?
Indlela yokukhetha isongo emlenzeni wami
Iziphi izinzuzo nokuthi yini ezonakalisa ukuzivikela kwethu?
Ukuphulukisa impahla ye-sitrobheli
Ukusetshenziswa kwamafutha e-almond okubalulekile ekunakekeleni isikhumba nezinwele
Isosa elibandayo Gazpacho
I-Spike ema-tubespian tubes
U-Alexei Vorobiev uyaqhubeka ekhuluma ngezinhlupheko zakhe
Abathandi baqhathanisa u-Olga Buzova nenkukhu eboshwe
Isaladi "Iwashi Lonyaka Omusha"
Scallops ene-lemon fondue